ခင်ဖောင်ရွာ မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါဧ။်: ကျောက်ကပ် အတွက် ဆေး
ခင်ဖောင်ရွာ မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါဧ။်
John 15:၇ သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည် တောင်းချင်သမျှကို တောင်း၍ရကြလိမ့်မည်။
ကျောက်ကပ် အတွက် ဆေး
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာခံစားနေရသူများမှာ လူလည်းပင်ပန်း၊ ငွေကြေးကုန်ကျမှု များပြားသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သိန်းထောင်ချီ၍ ချမ်းသာသောသူပင် ဒေ၀ါလီခံရသော ရောဂါပါ။ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများမှာ လူလည်းနာ ငွေလည်းကုန်လှပါသည်။ အချိန်အခိုက်အတန့်တစ်ခုသာ ထိန်းထားနိုင်ပြီး မရဏမင်းထံ သွားရသည်သာများပါသည်။ လဲလှယ်နိုင်မှသာ အသက်ဆက်နိုင်ပါသည်။ လဲဖို့စရိတ်ကလည်း သိန်းထောင်ကျော် ကုန်ကျပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာသည်များ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်ခါစတွင်ပျောက်ကင်း၍ နာတာရှည် ခံစားနေရသူများသက်သာပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများ အကြိမ်ရေ လျော့ပါးလာစေရပါမည်ဟု လုံးဝအာမခံပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ခံစားခဲ့ဖူးပါသည်။ သိသိခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် သုံးလအတွင်း ပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ စရိတ်သက်သာ အကုန်အကျနည်း၍ လုံးဝအထင်မသေးပါနှင့်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်ကြီးနေပြီဖြစ်သည့် HERBAL MEDICINE ကုသနည်းပါ။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များပြားလာသည့် အနောက်တိုင်းဆေးများကို သောက်သုံးရန် ချင့်ချိန်လာကြပြီး သစ်ဥသစ်ဖု သဘာဝအပင်များမှ
ထုတ်ယူသောဆေးများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ထုတ်လုပ်သည့် fame ဆေးတိုက်မှဆေးများ ကမ္ဘာတွင် နာမည်ရနေပါပြီ။ ယခုတင်ပြသောဆေးနည်းမှာ ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် သုံးစွဲခဲ့သောနည်းပါ။
၁။ ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းချိုကို နေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။ (အသား၊ငါး မရောပါနှင့်။ ရောဂါမရှိသေးသူများသောက်ပါက ဆီးကောင်းစေပြီး၊ ယောက်ျားများအတွက် ယောက်ျားပီသစေပါသည်။)
၂။ တရုတ်နံနံပင်ငါးရွက်ကို ရေနွေးဖြူထဲတွင်ထည့်စိမ်ပါ။ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်၍ ရေနွေးသောက်သလိုသောက်ပါ။ အဖတ်ဝါးစားပါ။ ညနေစာစားပြီး နာရီဝက်ခန့်ခြားပြီးမှသောက်ပါ။ အိပ်ချိန်နှင့်ဝေးပါစေ။ သွေးတိုးပါကျစေသဖြင့် မျက်လုံးကြောင်တတ်ပါသည်။ ည ခုနစ်နာရီဆိုလျှင် သင့်ပါသည်။
၃။ ကျောက်ကပ်ကြောင့် အသည်းအသန်အောင့်နေသူများ ကျောက်ဖရုံသီးကို ခွဲ အူတိုင်ထုတ်ပြီး ကျောက်ကပ်နေရာသို့ အတွင်းသားဖြင့်ကပ်၍ စည်းထားပါ။ တဖြေးဖြေးသက်သာလာပါမည်။
၄။ ရေပူစမ်းနှင့်နီးပါက တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ချိုးပါ။ မနီးပါက ရေနွေးနှင့်ချိုးပြီး ချွေးအောင်းပါ။
သုံးလအနည်းဆုံးထားပြီး ဆောင်ရွက်ပါ။ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများပင် အကြိမ်ရေလျော့လာသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ ပျောက်ကင်းသက်သာပါက လူတိုင်းအားဖြန့်ဝေပါ။ မသက်သာပါက ကျွန်တော့်အား စိတ်ဆိုးကြပါ။ ယနေ့အချိန်အထိတော့ လာရောက်ကျေးဇူးတင်သူသာ ရှိပါသေးသည်။ သက်သာကြသူသာတွေ့ရသဖြင့်အများအသုံးချနိုင်စေရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်ရပါသည်။
Posted by ခင်ဖောင်( ခေါ်) ဟုတ်(လ်) ခေါ် at 5:51 AM
မင်းရဲ့ ရယ်မော လှောင်ရီသံတွေ
ကြားမှာ ငါဟာ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့
မေးတော့ ဒီလိုပါပဲလို့ မင်းပြောခဲ့တယ်နော်
စောင့်မျှော်နေတဲ့ငါ့အတွက် ဘယ်သူ့ကို မေးမေး
ငါ့ ကို အရူးလို့ပဲ ပြောကြမှာပါပဲ
ငါ့ရဲ့ တန်ပြန်တဲ့ သက်ရောက်မှုကို
ငါ ခံစားရတယ်လို့ပဲ ငါသတ်မှတ်ပါတယ်
" ဒီလိုပါပဲ" လို့.............................
မင်းနဲ့ ငါ ဟာ အဝေးဆုံးကို
ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ခဲ့ရပြီပဲ ချစ်သူ...............................................
khin phoung video
ဘာသာ စကား ရွေးရန်
Follower this site
ခင်ဖောင် ရွာသူ များဧ။် လုံယူပွဲတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူ မောင်ထောင်းပုံ
I used to write love letters for him in English, but he never understood what I meant. Maybe, my words were too poetic for him or my feelings were not clear enough for him to understand. But yet, I still have many words for him, which I want to write down in English, although he can’t read them anymore. Dear Ko, It’s been very long that you’ve left me. Months passed and days move on but it seems only yesterday, that I last saw you. Your smile, your voice and your face are printed on my heart with the ink of blood. Every morning, I wakes up withachildish wish in my mind, which is to meet you later in that day. But my wish is still not fulfilled. Every night, I prays withaheavy heart and my main point is to see you again with my own eyes as soon as possible. Sometimes I think I see your shadow around me during the days. Sometimes, I think I hear your voice fromafar away place at many lonely nights. Stars are glittering as usual in the sky and clouds are drifting as freely as they are. I’m also living my life, doing my daily routines as usual. But who knows, that my heart is off rhythm. Between every single heart beat, it calls out your name, pleading for your return. And also in my mind, happy memories about you are starting to fade away, replacing with tears and pain. But my love, as long as my heart beats, it will continue to call your name and as long as my memories stay, they’ll continue to keep you in my mind. That means, I’m still waiting for you without giving up.
မိန်းမ . . . ဒီကြာသပတေးနံ နှစ်လုံးတွဲဟာ တော်တော် ကြည့်ရဆိုးတာပဲဗျို့… မိန်းမဆိုတာမျိုးမှာ ကောင်းတဲ့ မိန်းမရှိသလို မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလဲ အများကြီးဘဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ရည်ကို မိန်းမတစ်ယောက်ကပဲ အများအားဖြင့် ကျစေနိုင်တာပါ။ ယောက်ျားသေလို့ လွမ်းလို့ ငိုတာတွေ မပါဘူးဗျနော်။ ချစ်သူက သစ္စာဖောက်လို့၊ နောက်မိန်းမယူသွားလို့ ဆိုတာ လောကမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝကြီးပါဘဲ။ ယောက်ျားတွေ ဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုတာ ဒီလို မိန်းမတွေရှိနေလို့လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာလဲ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို မကောင်းတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်ဗျာ။ သိက္ခာကို တစ်နပ်စာနဲ့ လဲချင်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ (သိက္ခာ တန်ဖိုးကို လူတွေ သိပ်မသိတော့ဘူးဗျ)။ ခု မိန်းမဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့ မိန်းမတွေကိုပဲ သီးသန့် ဝေဖန်မယ်ဗျ။ ဒီခေတ်မှာ မိန်းမတွေ တော်တော်ကို ဆိုးရွားလာပါပြီ တခြားဘာမှ မကြည့်တော့ဘူး ပိုက်ဆံပဲ ကြည့်တော့တယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ မိန်းမရှိလား ကလေးရှိလား မသိ။ မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာရမှန်းလဲ မသိကြတော့ဘူး။ တော်တော်ကို ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ဥာဏ်မမှီနိုင်တော့ဘူး မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ အတွေးအခေါ်ကို သူတို့ ဘယ်လိုများ စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတာပါလိမ့်။ ခဏတာ လိုအပ်မှုကြောင့် ဘာလို့ သူများမိသားစုကို ဖြိုခွဲချင်ရတာပါလိမ့်။ ကိုကိုယ်တိုင် ဒီလို ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရော လက်သင့်ခံနိုင်ပါ့မလား။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာလို့ မစဉ်းစားကြပါလိမ့်။ အမှန်တော့ စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်တန်းကျလာတာ။ ဒီခေတ်မိန်းမတွေ မညံ့ပါဘူး၊ တော်ပါတယ်၊ အတော်များများ ပေါက်မြောက် ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီး စိတ်ဓါတ်သေးသိမ်လာတယ်။ အရာအားလုံးကို ယောက်ျားတွေနီးပါး လုပ်ကိုင်လာနိုင်တာနဲ့ ကိစ္စတော်တော် များများကို တန်ဖိုး မထားကြတော့ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စောင့်စည်းမှုကိုလည်း မီးအမှောင်ချထားကြတယ်။ ကျွန်တော် လိပ်ပြာ မိန်းမတွေကို ဝေဖန်တာ ရိုင်းချင်ရိုင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မိန်းမတိုင်းကို မဆိုလိုပါဘူး။ မိန်းမတ၀က်ကျော်ကျော်လောက်ကိုပါ။ ကျွန်တော် မေးချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူကို ရရင် တကယ်ပဲ ချမ်းသာရောလား? ဒါဆို ဘုရားဟောထားတဲ့ ကံကို ဘယ်မှာသွားထားမလဲ? ချမ်းသာလာတော့လဲ စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလား (သူများ မျက်ရည်ကျပြီးမှ) ပိုက်ဆံတွေ ချမ်းသာ လာတော့လည်း ခင်ဗျားတို့ တနေ့ ထမင်း ဘယ်နှစ်နပ်စားနိုင်သလဲ? လူတစ်ယောက်က ဘယ်ဇာတ်လမ်းပဲ ၀င်ကက သူ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကုန်ရင်တော့ နားရမှာပဲလေ။ အနိစ္စဆိုတာ ရှိနေသေးသမျှ ဘယ်အရာမှ ဖြစ်တည်နေမှာ မဟုတ်တာကို သိရက်သားနဲ့ ဘာလို့ ၀ဋ်ကြွေးတွေကို စုဗူးနဲ့ သိမ်းချင်ကြတာပါလဲ??? ခု ကျွန်တော် စာရေးနေတဲ့ 2နာရီ 7မိနစ်မှာ ပျော်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေမယ်၊ ၀မ်းနည်းတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိနေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက် 1နာရီလောက်ကျရင် အားလုံး လက်စသတ်ရတော့မှာပါဘဲ။ ဒီလိုပါဘဲ ဘ၀ဆိုတာ . .. ဒီလို သံသရာလည်တတ်တဲ့ လောကကြီးမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပြီး ဘာလို့ အဲလောက်တောင် အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေရသလဲ? တော်တော် ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မိန်းတွေရဲ့ သိက္ခာကိုချတာ ယောက်ျားတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မိန်းမတွေပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချတာ။ ကျွန်တော် ဒီလို ဝေဖန်ပုပ်ခတ်မရေးချင်ပါဘူး။ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ သတိပေးတာပါ။ မြင်ရ ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာပဲ ရင်လေးလွန်းလို့ပါ။ လောကကြီးက လူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကောင်းမှ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှာပါ။ ကိုကိုယ်တိုင်မှ မကောင်းပါပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတာကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ပြုလို့ သမီးမိန်းကလေးသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အဖေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားမျိုးမှာ ဘယ်လို ထားရမှာပါလိမ့်။ ကျွန်တော့် သမီးလေးဟာ အဲလို မိန်းမမျိုးသာ ဖြစ်လာရင်တော့ ကျွန်တော်တော့ ရင်ကွဲရပါပြီဗျာ … In: ဆောင်းပါး
လူတွေအားလုံးသိတယ် ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေနဲ့ အဝေးမှာရှောင်ပုန်းနေခဲ့တာ မင်းမုန်းမှာစိုးလွန်းလို့ ။ တကမ္ဘာ
Heart… Lost… Someone stolen? YOu’ve stolen… Days , nights At your shade. On your sights.. Always I’m! My heart fields own to you…… Beat heart… My thoughts in you! Everymoment isn’t peace Moments also stolen by you… I wanna join my heart-beats to yours!! I wanna join my breaths with yours!! I wanna join myself to you!! Heart? Also my seoul ‘ve been give to you… For me? Nothin’ else, but you!!!
ခင်ဖောင် ရွာသူကြီးဟောင် မိသားစု
ခင်ဖောင်( ခေါ်) ဟုတ်(လ်) ခေါ်
ပြမည့် Blog အမျိုးအစား
ခင်ဖောင်ရွာ သို့ လာလည်သူ ဦးရေ ပေါင်း
ဟိုနေ့က ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ မမ၀ါ ဆီကဖုန်းလာတော့ မာကြောင်းသာကြောင်းတွေပြောကြပါတယ်။ ဟိုလူနေကောင်းလား ဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့ရောတွေ့သေးလား အဆင်ပြေလားဘာလားအရေးမပါဘူးဆို
ဟိုနေ့က ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ မမ၀ါ ဆီကဖုန်းလာတော့ မာကြောင်းသာကြောင်းတွေပြောကြပါတယ်။ ဟိုလူနေကောင်းလား ဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့ရောတွေ့သေးလား အဆင်ပြေလားဘာလားအေ...
there is the only thing for me to get joy whenever i imagine is about my friends.all i have attachment is concerned with friends.loving frie...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာသည်များ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာခံစားနေရသူများမှာ လူလည်းပင်ပန်း၊ ငွေကြေးကုန်ကျမှု များပြားသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သိ...
ဂျူးအမြင် ခရစ်ယာန်များဟု လူများအထင်မှားခံရပြီး တစ်အိမ်တက်ဆင်း ယေရှုသည်ဘုရား မဟုတ်ကြောင်း သက်သေခံနေသည့် ယေဟောဝါ ခေါ် ကင်းမျှော်စင်အဖွ...
I blush of your well forged smile Veins and nerves go lose of your thought I love the way you touch me, Always sending chills down my spi...
happy birthday ချစ်သူ
ဇူလိုင်လရဲ့မိုးရေစက်တို့အောက်မှာ..ချစ်သူ့မွေးနေ့ကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ “ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ” အနားမှာမရှိတော့တဲ့ချစ်သူအတွက...
Chinland Guardian - Burma Announced Elections Laws with No Details
Chinland Guardian - Burma Announced Elections Laws with No Details hi.ahina welcome to dai people website nami theng kiya ng'chang ...
Don't Quit! လက်မလျှော့နဲ အောင်မြင်သူနဲ့ ရှုံးနိမ့်သူရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ အစွမ်းအစ (talent) ကွာလို့မဟုတ်ပါဘ...
ကျင့်ဆောင် လိုက်လျောက်၇န် - ပညတ်တော်မြတ် ၆၁၃ ပါး
ပညတ်တော်မြတ် ၆၁၃ ပါး မေးလိုက်လျင် ..ခရစ်ယာန် အများစုဟာ ထာဝရဘုရား၏ အလိုတော်ကို လိုက်နာလိုသုများဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့.. ထာဝရ...
ကျွန်တော် ဒီစာလေးရေးတာက ကျွန်တော့်ချစ်သူအတွက်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်သူက ကျွန်တော့်ကို ခဏခဏမေးတယ် တကယ်ချစ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား? ချစ်လား ချစ်လား ဆု...
Thank you for Visite our Village, GOD BLESS ALL. Travel theme. Powered by Blogger.